Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" na-abịa site na ngwa sitere na Gnome 40, Wayland na ndị ọzọ | Site na Linux
Izu gara aga Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" weputara ọkwa, nke nkewa dị ka a nwa oge version, bụ ndị e guzobere mmelite ha na ọnwa 9 (nkwado ga-eme rue Jenụwarị 2022).
Versiondị ọhụrụ nke Ubuntu 21.04 na-agụnye ọtụtụ mgbanwe ndị dị ezigbo mkpa nke na-amalite ịtọ usoro nke a na-ewere maka usoro LTS na-esote nke sistemụ ahụ na ọ bụ ezie na ụdị a etinyeghị GNOME 40 ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ atụmatụ ọhụụ.
1 Main atụmatụ ọhụrụ nke Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"
2 Budata ma nweta Ubuntu 21.04
Main atụmatụ ọhụrụ nke Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"
Versiondị Ubuntu ọhụrụ a batara na GNOME Shell 3.38 n'iji GTK3, ma iji ngwa GNOME 40, ma e wezụga ihee Linux kernel Linux ka emelitere na nsụgharị 5.11, nke gunyere nkwado nke Intel SGX enclaves, usoro ohuru maka igbochi oku sistemụ, ụgbọ ala na-enyere aka ụgbọ ala, na-egbochi mkpokọta modulu na-enweghị MODULE_LICENSE (), nzacha ngwa ngwa nke usoro sistemụ na seccomp, nkwụsị nkwado maka ụlọ ia64, nyefe site na teknụzụ WiMAX na ngalaba "staging", ikike iji mechie SCTP na UDP.
N'ebe a na-ahụ anya, anyị nwere ike ịchọta nke ahụ agbadoro ohuru ohuru banyere YaruNa mgbakwunye, akara ngosi emelitere iji mata ụdị faịlụ.
Ọzọkwa agbanweela ụdị nnweta ụlọ ndekọ ụlọ nke ndị ọrụ na usoro; a na-ahazi akwụkwọ ndekọ aha ụlọ ugbu a ya na ikikere 750 (drwxr-x -), na-enye ohere ịnweta ndekọ na ọ bụ naanị onye nwe ya na ndị otu ya.
Na desktọọpụ, anyị nwere ike ịchọta ike iweghachite akụrụngwa site na ngwa site na iji usoro ịdọrọ na dobe na ntọala, ị nwere ike ịgbanwe profaịlụ oriri ike ugbu a.
Ọrụ Ndekọ mwekota ka mma na ikike iji gosipụta ndị ọrụ na Active Directory na GPO (Group Policy Objects) nyere nkwado ozugbo wụnye Ubuntu.
Ndị nchịkwa nwere ike ijikwa ebe ọrụ Ubuntu site na nhazi ntọala na njikwa ngalaba na-arụsi ọrụ ike, gụnyere ntọala desktọọpụ na usoro nke ngwa ndị a tụrụ aro. Enwere ike iji GPO kọwaa amụma nchekwa maka ndị ahịa niile ejikọtara, gụnyere ịhazi nhazi ohere onye ọrụ yana iwu maka ịdebanye okwuntughe.
Ihe omuma ohuru nke puru iche bu na agbakwunye ya Pipewire Media Server nkwado iji mee ka ndekọ ederede, melite nkwado ọdịyo na ngwa sandbox, nye ike nhazi ọrụ ọdịyo, kpochapụ mpekere, ma jikọọ akụrụngwa ọdịyo maka ngwa dị iche iche.
Onye nrụnye agbakwunyela nkwado maka ịmepụta igodo nchekwa iji weghachite nnweta nkewa ezoro ezo, nke enwere ike iji decrypt ma oburu na okwuntughe efuru, tinyere nkwado enyere maka UEFI SecureBoot na sistemu x86_64 (amd64) na AArch64 (arm64).
A kpụgara oyi akwa maka ịhazi nzukọ buut ejiri maka usoro SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), nke na-edozi nsogbu na nwepu akwụkwọ. E tinyela nkwado SBAT na nchịkọta grub2, shim, na fwupd. SBAT gụnyere ịgbakwunye metadata ọhụrụ, nke a na-edebanye aha ya na digri ma enwere ike itinye ya na ndepụta akụrụngwa maka ikikere ma ọ bụ amachibidoro maka UEFI Secure Boot.
Banyere chịkọtara nke Rasberi Pi, na ụdị ọhụrụ nke Ubuntu 21.04, nkwado maka Wayland gụnyere. Nkwado GPIO gbakwunyere (site na libgpiod na liblgpio). Compute Module 4 mbadamba ugbu a na-akwado Wi-Fi na Bluetooth.
Nakwa na ụdị ọhụrụ a nke Ubuntu 21.04 maka desktọọpụ, na ndabara, enyere nnọkọ dabere na usoro iwu Wayland. Mgbe ị na-eji ndị ọkwọ ụgbọ ala NVIDIA eme ihe, na ndabara, dịka ọ dị na mbụ, a na-enye nnọkọ dabeere na ihe nkesa X, mana maka nhazi ndị ọzọ a na-ebufe oge a na ngalaba nhọrọ.
Achọpụtara na ọtụtụ njedebe nke oge GNOME na Wayland ewepụla n'oge na-adịbeghị anya, bụ ndị a kọwara dịka nsogbu na-egbochi mgbanwe na Wayland. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume ịkekọrịta desktọọpụ site na iji sava mgbasa ozi Pipewire.
Budata ma nweta Ubuntu 21.04
N'ikpeazụ, maka ndị chọrọ ibudata ma wụnye ụdị Ubuntu a na kọmputa ha ma ọ bụ nwee ike ịnwale ya na igwe arụmọrụ, Ha kwesiri ibudata onyonyo sistemu site na webụsaịtị gọọmentị nke sistemụ ahụ.
Enwere ike ime nke a njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" na-abịa site na ngwa sitere na Gnome 40, Wayland na ndị ọzọ
Ndị otu Mahadum nke Minnesota kọwara ihe mkpali maka ịnwale kernel Linux